जापानमा आश्चर्यजनक रुपमा थोरै ५ तारे लक्जरी होटल छन्। किन होला? | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > Kyoto > जापानमा आश्चर्यजनक रुपमा थोरै ५ तारे लक्जरी होटल छन्। किन होला?
हजुरलाई एउटा अनौठो प्रश्न है त। अमेरिका, चीन, फ्रान्स र इटालीमा धेरै भएका तर जापानमा थोरै भएका कुरा के के हुन् ?
यो लेखको टाइटल पढेर पनि हजुरले थाहा पाइसक्नु भयो होला कि माथिको प्रश्नको एउटा उत्तर पाच तारे होटल हो। जापानमा अरु देशलाई दाज्ने हो भने कति वटा पाच तारे होटल होला त? हजुरलाई थाहा छ लन्डनमा ७९, पेरिसमा ६१, न्यु वर्कमा ६०, चीनमा १३७, थाईल्याण्डमा ११२, इटालीमा १८६ र अमेरिकामा ७९३ वटा पाच तारे होटल रहेका छन्।
तर जापानमा यस्ता होटल मात्र ३२ वटा छन्। जापान जस्तो बिकसित देशमा कि यति थोरै पाच तारे होटल रहेको होला।
यसको एउटा प्रमुख कारण भनेको जापानमा रहेको रियोखान हो। रियोखान जापानको पुरानो स्टाइलको होटल हो जहाँ तारे होटलको झैँ सुबिधा सम्पन्न बस्ने र खाने ब्यबस्था गरिएको हुन्छ। जापान देश आफ्नो मौलिकतामा बिस्वाश गर्दछ। त्यसैले पनि पहिले देखिनै यहाँ त्यस्तो तारे होटलको आवस्यक परेन होला।
𝗡𝗶𝗵𝗼𝗻𝗿𝘆𝗼𝗸𝗮𝗻 – 日本旅館(@nihonryokan)がシェアした投稿 – 2019年11月月21日午前7時21分PST
रियोखानले निकै महत्व राखेको एउटा ठाउ क्योतो हो। क्योतो जापानको टोकियो पछिको ठूलो सहर हो। तथापि क्योतोले निकै पछि सम्म कुनै पाच तारे होटल देखेन। आधुनिक होटल नभएको ले होला, क्योतोको पुरातन सुन्दरता अझ बढी झल्कन्थ्यो। तर पछि यहाँ रिज-कर्ल्टनले आफ्नो होटल खोल्यो। त्यस्पस्चात यो यहाँको पहिलो फ्ल्याग्सिप होटल बन्यो। यो होटल आफ्नो जन्म स्थल अमेरिकामा भन्दा पनि जापानमा न्यान्यो सर्भिस दिने भनेर प्रख्यात भयो।
तर रिज-कर्ल्टनको उदय संगै अरु थुप्रै होटल बहने खुली हालेनन्। थोरै मात्र नया होटल थपिएता पनि धेरै ठूलो चेन्ज भने भएन। तर २०१६मा जब फोर सिजन क्योतो खुल्यो तब क्योतोले होटल लाइनमा चेन्ज नहासुस गर्यो। फोर सिजन क्योतो, फोर सिजन होटल ब्राण्डको लागि निकै ठूलो सफलता थियो। फोर सिजनको पहिलो जापानी होटल फोर सिजन टोकियो मारुनोउचि हो। चिजान्सोको फोर सिजन होटल धेरै वर्ष पहिले नै प्यारेन्ट कम्पनि संग छुटेको थियो।
फोर सिजन क्योतोमा आएको तिन बर्ष पछि पार्क हायात र अमन होटल पनि क्योतोमा आफ्नो चमक देखाउन आइपुगे।
Park Hyatt Kyoto / パーク ハイアット京都(@parkhyattkyoto)がシェアした投稿 – 2020年 1月月9日午前1時45分PST
हालसालको वर्षमा किन यति धेरै लक्जरी होटल खुलेका होलान। यसको प्रमुख कारण जापनमा बढेको पर्यटकको संख्याले गर्दा हो। जापानमा आजको १० वा ५ वर्ष भन्दा निकै धेरै पर्यटक आउने गरेका छन्। जापानीहरु क्योतोमा गएर आरामदायी रियोखानमा बस्न मन पराउने भएता पनि बिदेशीहरुको रुचि भिन्न हुन सक्दछ। यी बिदेशी पर्यटकको डिमाण्डलाई मध्यनजर गरेर अहिले जापानमा थुप्रै यस्ता होटल खोलिएको हो।
जापानमा यस्ता पाच तारे लक्जरी होटलको कमि हुनु पछाडिको अर्को कारण यहाँ बिजनेस होटल लोकप्रिय भएर पनि हो। जापानमा आर्थिक संकट हुने बेला धेरै ससाना बिजनेस होटलहरु संचालनमा आए। यस्ता होटलहरुले ठूलो होटलको जस्तो पुल, ठूलो रुम, डाईनिङ्गको सुबिधा दिन्न थिए।
ホテルモントレグループ【公式】(@hotelmonterey)がシェアした投稿 – 2019年 8月月16日午後11時23分PDT
अहिले पनि जापानमा बिजनेस होटल धेरै जसो जापानी र पर्यटकको पहिलो रोजाईमा पर्दछ। यो सस्तो हुने भएर नै पपुलर बनेको हो। हुन पनि हजुरले सस्तो मूल्यमा सफा कोठा पाउनु हुनेछ भने आकार सानो भएर के फरक पर्छ र हैन त। धेरै जसो बिजनेस होटल एक दिनको ८००० येन बाट सुरु हुन्छन। कुनै त यो भन्दा सस्तो पनि भेटिन सकिन्छ। बिजनेस होटल धेरैको लागि घुम्न जानलाई बजेट होटलको उत्तर थियो।
तर धेरै बिजनेस होटल र कम लक्जरी होटलले गर्दा जापानमा रहेको यो लुकेको मार्केट बिदेशी होटल चेनहरुले थहा लगाए र नया लक्जरी पाच तारे होटल खोले।
Aman Tokyo(@aman_tokyo)がシェアした投稿 – 2018年 1月月11日午前4時23分PST